Ifonti entsha yeDuolingo ihambelana ncam nesilwanyana sakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Duolingo Debuts New Font ebonisa ngokupheleleyo uBuntu bakho
La Imascot yesikhova sikaDuolingo lukhuthazo ngomthombo wakhe omtsha okwaziyo ukubamba ubuntu bakhe, kwaye ngaloo ndlela umse kwezo memes kunye nokwazisa ukuba ukusukela ngoku sizakubona kumajelo awo ahlukeneyo.
I-Duolingo luhlelo lokufunda ulwimi olubulela ekufundeni ngokudlala lube luphawu lwezigidi zabantu kwihlabathi liphela. "Ukukhuliswa" kwayo kuvumele iilwimi ezinzima inokufundwa ngaphandle komzamo omncinci.
NguJohnson Banks kunye noFontsmith abasebenze ngokudibeneyo ukwenza ifonti yabo ebizwa ngokuba ziintsiba ngesibindi. Uhlobo lohlobo lokuzalwa olwazalelwa ukuzonwabisa kwaye lubambe uvelwano olunalo mascot kaDuolingo, isikhova sakhe.
Kwaye kukuba kuvavanyo lokuqala lweeBhanki waqonda ukuba umbala kunye nesimbo Umzekeliso we-Owl usebenza kuhlobo olutsha lochwethezo, ke baya phambili ukuyizisa kwaye bayenza ukuba ibe ngumthombo wale app yokufunda ulwimi.
Ngoncedo lweFontsmith, iiBhanki zikwazile ukwandisa ilogo kunye nokuphucula uyilo lwefonti yeentsiba ukongeza amanqaku athile awodwa. Sithetha ngayo ukujikeleza nkqo kugobile kwi «g» kwaye ichaza inqaku elihle le-Duolingo mascot.
Igophe esinokulibona kwezinye iileta ezinje ngo "d" okanye "l". Inqaku ofuna ukukhankanya kunye nokudibanisa umsebenzisi weapps zakho. Kwaye ukuba sijonga indlela i-typography ebonakala ngayo kwi-infographic yakho, inyani kukuba ibukeka intle.
Indlela ekhawulezayo yokucebisa uhlobo lohlobo lokuchwetheza lunokusebenza njengokubeka uphawu brand kwaye yiyo loo nto ichaza awona manqaku abalulekileyo enkonzo yokufunda iilwimi. Into efana nale yenziwe yi-IKEA kunye nefonti ekhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Duolingo Debuts New Font ebonisa ngokupheleleyo uBuntu bakho
Xa ungaze wenze impazamo yoyilo njenge logo yeChicago Bulls